Black Friday 2022 na laptọọpụ: azụmahịa kacha mma
Ọ bụ ebe a Black Friday na laptọọpụ. Maka ụbọchị 10 ị ga-ahụ ego n'ọtụtụ ụdị na ụdị mana ebe a, anyị ga-egosi gị azụmahịa kacha mma ma anyị achịkọtala gị ọnụ ahịa kacha mma na kọmpụta dị iche iche ka ị nwee ike ịhọrọ dabere na ihe ịchọrọ: enwere mkpa, egwuregwu, ike ... .na nke niile ụdị. Jiri ohere ndị a mee ihe n'ihi na ha ga-adịru ntakịrị, obere ntakịrị!
Black Friday na laptọọpụ: azụmahịa kacha mma
Nke a bụ nhọrọ nke azụmahịa laptop kacha mma dịlarị na Black Friday. Na-eleta ibe a kwa ụbọchị n'ihi na anyị ga-eji ihe ọhụrụ emelite ya kwa elekere. Enweghị oge ọzọ, nke a bụ nhọrọ kacha mma Laptọọpụ ndị agbadala ọnụ ahịa n'ime izu ụka ojii ojii 2022:
Hụ ahịa laptop niile maka Black Friday
Ihe ndị a niile bụ maka izu Black Friday na laptọọpụ nke nta nke nta, anyị ga-agbakwunyekwu ma na-agbaso ndụ iji kwalite na ọnụ ego ndị ọzọ. Anyị na-akwado ka ị na-eleta anyị kwa ụbọchị ka ị mara maka azụmahịa Black Friday kachasị ọhụrụ na laptọọpụ.
Mmelite: Taa, Nọvemba 25, Black Friday amalitelarị na ezigbo laptọọpụ, na-enye onyinye kachasị mma na ụdị ụdị na ụdị niile. Mee ngwa ngwa tupu ha agwụchaa.
Laptọọpụ na-ere maka Black Friday
Laptọọpụ Black Friday: Ndekọ azụmahịa
1 Black Friday na laptọọpụ: azụmahịa kacha mma
2 Laptọọpụ na-ere maka Black Friday
2.5 I7 laptọọpụ
2.6 I5 laptọọpụ
2.7 Laptọọpụ egwuregwu
2.8 Laptop 15 inch
2.9 Laptop 17 inch
3 Kedu mgbe bụ Black Friday 2022
4 Kedu ka Black Friday si arụ ọrụ na laptọọpụ na Amazon
5 Ogologo oge ole ka Black Friday na-adị na laptọọpụ?
6 Kedu ihe kpatara Black Friday 2022 ji bụrụ afọ pụrụ iche maka azụmahịa laptọọpụ?
7 Gịnị kpatara eji akpọ ya Friday ojii?
8 Kedu nke ka mma, Fraịde ojii ma ọ bụ monday cyber?
9 Otu esi enweta ọmarịcha azụmahịa na laptọọpụ Black Friday
10 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ dị ọnụ ala na Black Friday
N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ nhọrọ nke laptọọpụ ndị a na-achọkarị na Black Friday iji nweta echiche nke ụdị na ụdị ndị a na-erekarị ma wedata ọnụ ahịa ha n'ụbọchị ndị a:
Laptọọpụ HP bụ ndị na-aga ịre ahịa buru ibu na Black Friday. N'ime afọ ha na-enye ọnụahịa dị mma mana ọ bụ n'izu Black Friday mgbe anyị nwere ike ịhụ ego karịa 40% na ụfọdụ ụdị ha.
Kọmputa Lenovo dị n'ụdị dị iche iche, site na nke dị ala na nke dị ọnụ ala ruo nke kachasị elu na nke kachasị ọnụ, mana dịkwa ike. Lenovo bụ otu n'ime ụdị ndị ga-enye kọmpụta ya na ezigbo mbelata n'oge Black Friday, mbelata nke anyị ga-ahụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ya niile na oke ya.
Kọmputa Asus na-abụkwa ezigbo uru maka ego. N'ime katalọgụ ya, anyị na-ahụ ụdị laptops dị iche iche, gụnyere nke a na-eji arụ ọrụ ma ọ bụ egwuregwu, mana ọ na-akwụkwa ụgwọ mgbe niile. Ọnụ ego ahụ ga-adị mma karịa na Black Friday, ma ọ bụrụ na anyị chọgharịa nke ọma ma họrọ ihe nlereanya ziri ezi, anyị nwere ike ịchekwa nnukwu ego.
Mgbe Apple MacBooks na-ọnụ n'etiti $ 1000 na $ 2000, ọ bụla ego bụ karịa nnabata.
Ọ bụrụ na anyị ahọrọ ụdị nwere nnukwu eserese, ikike nchekwa dị n'ime ya na ụdị ugbu a karịa, ọnụahịa ahụ nwere ike iru 3.000 €. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị na-enweta mbelata 21% na Black Friday na MacBook 1499 €, anyị ga-echekwa ihe karịrị € 250. Ọ bụrụ na kọmputa na-efu anyị € 3.000 na mbelata bụ 21%, anyị ga-echekwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ € 600.
Ọ bụ ya mere na ọ dị ezigbo mkpa iji uru nke ego ndị a, n'ihi na ụfọdụ ga-adị ukwuu ma ndị ọzọ na-erughị ala, ma ha niile ga-enyere anyị aka ịchekwa ma nweta MacBook ọhụrụ maka mahadum, ọrụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Black Friday bụ ụbọchị kachasị atụ aro ịzụta ngwaahịa Apple ọhụrụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na nke a bụ iMac ma ọ bụ MacBook, nke kachasị ọnụ na ika ahụ, yabụ ekwela ka ọ gbanarị.
Laptọọpụ nwere Intel i7 processor ga-abụ otu n'ime ngwaahịa kpakpando n'oge Black Friday.
Ọ bụ otu n'ime ndị nrụpụta Intel kacha mma anyị ga-ahụ taa, mana ọ bụghị nke kachasị elu na oke. N'ihi nke a, ọ ga-adị mfe ịchọta ha n'oge ụdị ihe omume a, ana m ekwe gị nkwa na ha bara uru maka arụmọrụ ha na-enye.
N'oge Black Friday anyị ga-ahụkwa ọtụtụ kọmputa nwere Intel i5 processor.
Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ihe nhazi nke etiti, nke pụtara na ọ na-enye ihe karịrị ezigbo arụmọrụ na ọnụ ahịa ya dị ala karịa nke ụmụnne ya ndị tọrọ ya.
Kọmputa ndị e bu n'uche na-egwu egwuregwu emebere na-abụkarị kọmpụta nwere akụrụngwa dị elu karịa. Nke a pụtakwara na ọnụ ahịa ha ga-adị elu, mana n'oge Black Friday anyị ga-ahụ ọtụtụ n'ime ha nwere ọnụ ala dị ala nke ga-enye anyị ohere ịchekwa ọtụtụ narị euro mgbe ụfọdụ.
Agbaghara anyị nhọrọ nke Ngwa Laptọọpụ egwuregwu Black Friday iji nweta ego kacha mma.
Kọmputa dị inch 15, ma ọ bụ karịa kpọmkwem nke 15.6, bụ ndị na-eji ihuenyo nha ọkọlọtọ. Anyị nwere ike ịchọta laptọọpụ nwere ihuenyo 15-inch n'ụdị ọnụahịa ọ bụla, ebe ọ bụ na nkọwapụta a na-ezo aka naanị nha, mana ihe dị mkpa bụ mkpebi ya na ihe ndị dị n'ime ya.
Ya mere, anyị maara na n'oge Black Friday anyị ga-achọta ezigbo azụmahịa, ma ego ahụ ga-adabererịrị na nkọwa ndị ọzọ, ika na ụlọ ahịa na-enye ngwaahịa ahụ.
Kọmputa dị inch 17 abụghị ihe ka n'ọnụ ọgụgụ, ebe anyị na-ekwu maka kọmpụta nwere ihuenyo dịtụ ibu karịa nke a na-ewere dị ka ọkọlọtọ.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị emezu n'oge ụfọdụ, n'ozuzu anyị ga-emeso kọmputa ndị nwere ezigbo ihe dị n'ime ya, n'ihi ya, ha ga-adị ntakịrị ọnụ karịa ndị nwere obere ihuenyo.
A ga-ahazi ụfọdụ n'ime ha maka egwuregwu, mana nke a abụghị ụkpụrụ edere. Ihe bụ iwu edere bụ na ha ga-anọ na ọnụahịa ka mma n'oge Black Friday.
Dịka ị na-ahụ, taa enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke azụmahịa laptop maka Black Friday. N'afọ a, nhọrọ dịgasị iche iche nke laptọọpụ egwuregwu dị n'ebe ahụ na-adọrọ mmasị karịsịa, o doro anya na ndị na-egwu egwuregwu na ndị na-achọ kọmputa nwere ike dị ukwuu na-abụ nnukwu onye na-akwado ahịa nke afọ a.
Ị chọrọ ịhụ onyinye ndị ọzọ na laptọọpụ na ngwa kọmputa?
Lee Black Friday na-enye na kọmpụta
N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ azụmahịa laptop niile nke dị na ụbọchị tupu Black Friday. Ọtụtụ onyinye emebiela mana ndị ọzọ ka na-akwụ ụgwọ ọnụ ahịa ha ma ọ bụ bilitere ntakịrị, yabụ na ha nwere ike bụrụ ezigbo ohere iji chekwaa ego ma mee ka ịzụrụ dị ọnụ ala karịa.
Kedu mgbe bụ Black Friday 2022
El Black Friday, makwaara dị ka Black Friday, bụ ụbọchị nke ndị na-azụ ahịa na ndị na-azụ ahịa na-achọsi ike n'ihi uru niile ọ gụnyere maka ha. Ọ bụ ụbọchị ịzụrụ ihe, ụbọchị onyinye, ahịa na ego. Na Spain, ememe a gbasaara ekele maka ịzụ ahịa n'ịntanetị na ijikọ ụwa ọnụ na mbata nke ịntanetị. Na, n'agbanyeghị na United States ọ bụ ụbọchị a ma ama na nke gbanyere mkpọrọgwụ, nke ahụ apụtaghị na na Spain, a na-eme ememe Black Friday.
Ụbọchị Black Friday abụghị ihe karịrị otu ụbọchị mgbe Ekele gasịrị, ezumike a na-eme na United States. N'afọ a 2022, ụbọchị a ga-eme ememe Black Friday Ọ ga-abụ Nọvemba 26, 2022 na-abịa, n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime onyinye ha na-agbatịkarị ruo Mọnde na-esote, nke dabara na Nọvemba 29 nke afọ a. A na-akpọ Mọnde na-esote Black Friday dị ka Cyber ​​​​Monday, nke na-enye nke kachasị, mana naanị ma ọ bụrụ na emebere ya n'ịntanetị.
N'ihi na Black Friday bụ naanị otu ọnwa tupu ekeresimesi ekeresimesi na ekeresimesi, ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị na-azụ ahịa na-eji ohere nke ụbọchị a zụta ihe niile ekeresimesi ma chekwaa dị ka o kwere mee na ha. Eziokwu bụ na enwere ọtụtụ onyinye na ọnụ ahịa dị ala nke na ọ na-aghọ nkwupụta maka ọha na eze. A na-ahụ onyinye kacha mma nke afọ naanị otu ugboro n'afọ, n'ụlọ ahịa ọkacha mmasị gị niile, ọ ga-abụkwa Nọvemba 27 na-abịa. Chọpụta nke ọma iji nweta ọtụtụ ihe ndị a na-enye ma mara na ebe nrụọrụ weebụ na ụlọ ahịa ị ga-achọ ọnụ ahịa dị ala maka ngwaahịa niile ịchọrọ, site na uwe ruo ngwa ngwa, egwuregwu, egwuregwu vidiyo na, olee otú ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụghị, kọmputa na ngwá electronic. .
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta ihe ụbọchị a gụnyere maka ndị na-azụ ahịa yana otu ị ga-esi rite uru na ya, gụọ n'ihu, ka anyị ga-ahụ ihe ọ pụtara ọ bụghị naanị maka ahịa izugbe, mana karịa maka nke laptọọpụ na MacBooks Apple chọrọ.
Kedu ka Black Friday si arụ ọrụ na laptọọpụ na Amazon
Amazon bụ otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma ịzụrụ ihe, ha nọ na ngalaba nke ha nọ. Mbupu ngwa ngwa ma dị irè, ọtụtụ nhọrọ ịzụ ahịa na ihe ndị ọzọ ịhọrọ site na, atụmatụ adịchaghị mma na mbupu ngwa ngwa, yana ọnụ ahịa dị ala na nke ukwuu. Enwere ọtụtụ uru nke nyiwe na weebụsaịtị dị ka Amazon na-enye anyị, ndị a na-amụba otu ugboro n'afọ, na Black Friday. Nnukwu ịzụrụ ihe n'ịntanetị na ịre ahịa na-esonye na ezumike, kedu ka ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụghị, na-ewetara anyị ihe mara mma na onyinye dịgasị iche iche maka ụdị ọ bụla. Ị na-anwa anwa ịchọpụta ihe Amazon nwere maka gị? Ọ dịbeghị mgbe a zụrụ ọtụtụ ngwaahịa na onyinye ekeresimesi n'ọnụahịa dị ala dịka na Black Friday. Ntị na atụmatụ webụsaịtị a.
Amazon na-enye onyinye kwa ụbọchị n'elu ikpo okwu ya, mana ọ nweghị nke atụnyere nke anyị ga-ahụ na Nọvemba 27. Ụzọ Amazon si eme ya bụ site na ntinye ngwa ngwa na nke nwa oge, na-agbaso usoro nke afọ ndị ọzọ mere. Maka ọtụtụ n'ime ha, anyị agaghị enwe ihe karịrị 10 nkeji, ya mere ọ ga-adị mkpa ikpebi ma a na-ewere ha ma ọ bụ hapụ ha. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụgodị na ị gbakwunye ya na ụgbọ ahịa ịzụ ahịa, oge ahụ ga-anọgide na-agba ọsọ na njedebe nke 15 nkeji site na oge ịzụrụ, n'ihi ya, ị ga-adị ngwa ngwa ma ọ bụ na ị ga-efunahụ ngwaahịa ahụ na ya na-enye ya.
Iji hụ na ị gaghị echefu onyinye ndị ahụ yana ngwaahịa niile na-abịarute n'oge dị mkpirikpi, ị nwere ike ịdenye aha na Amazon Premium ọrụ, hazie ụbọchị ịzụ ahịa na Amazon ma buru n'uche ịdị adị nke ndepụta nchere, ma ọ bụrụ na ọ dị. A na-edobe ngwaahịa achọrọ ma hapụ gị ka ọ na-eche.
Dị ka isi ihe ọhụrụ, n'afọ a, anyị na-ahụ Black Friday na laptọọpụ ogologo oge karịa mgbe ọ bụla na nke ahụ maka awa 48, ị ga-enwe ohere ịnweta ego ruru 30%. Ị nweghị ihe ngọpụ iji megharịa kọmputa gị.
Hụ azụmahịa laptop maka Black Friday
Ogologo oge ole ka Black Friday na-adị na laptọọpụ?
Black Friday abụghịzi naanị otu ụbọchị n'afọ mana, site n'afọ ruo n'afọ, ọ na-adị ogologo oge. Ugbu a, anyị nwere ike ikwu banyere "The Week of Black Friday" ma ọ bụ ọbụna "Ọnwa nke Black Friday" na ọ dịghị ihe siri ike ịhụ otú azụmahịa na online ụlọ ahịa na-amalite na-amalite mbụ amụọ na laptọọpụ na ndị ọzọ ngwaahịa 15 ụbọchị tupu ụbọchị nke ụbọchị. Black Friday.
Onyinye ndị a na-abụkarị ihe mmalite maka ihe ga-abịa, n'agbanyeghị na a ka na-ahapụ ezigbo azụmahịa maka nnukwu ụbọchị, ya bụ, Fraịde.
Black Friday ahụ adịla ogologo oge n'oge dị mma iji nwee ike iji ọnụ ahịa tụnyere ọnụahịa ma nweta uru dị mma nke onyinye a mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nke laptọọpụ Black Friday wedara ọnụahịa ha kacha, ebe a, anyị ga-esochi ya na ndị niile. enye.
Kedu ihe kpatara Black Friday 2022 ji bụrụ afọ pụrụ iche maka azụmahịa laptọọpụ?
Echeghị m na ọ na-eju onye ọ bụla anya n'oge a ma ọ bụrụ na anyị agwa ha na ahịa laptọọpụ agbawala. Enwere isi ihe abụọ kpatara nke a:
Nke mbụ n'ime ndị a bụ mbata nke teleworking. Ọtụtụ ndị mmadụ ahụla ka ha ga-esi na-arụ ọrụ site n'ụlọ na ekele maka laptọọpụ ha nwere ike ịchọta nkwekọrịta n'etiti mmegharị na ọrụ ka ha nwee ike ịrụ ọrụ site na ebe ọ bụla.
Ihe nke abụọ kpatara ya bụ izi ihe. Ọtụtụ klaasị mahadum na kọleji ka amanyela ịnọrọ onwe ha ma, nke a, malite iji ngwaọrụ ịntanetị na-eme klaasị n'ịntanetị, nyefee ọrụ, mụọ akwụkwọ, rụọ ọrụ ụlọ….
Ọ bụrụ na anyị nwere kọmpụta mara mma iji rụọ otu n'ime ọrụ abụọ a, zụta laptọọpụ dị ọnụ ala na Black Friday 2022 ọ bụ ohere pụrụ iche iji chekwaa narị narị euro.
Gịnị kpatara eji akpọ ya Friday ojii?
Mgbe anyị na-asụgharị aha ezumike a n'ụzọ nkịtị, ọ nwere ike iyi ka ọ bụ ụbọchị ọjọọ ma ọ bụ ụbọchị ọjọọ, ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ụbọchị ọṅụ, n'ihi na ọ na-enye anyị onyinye dị ukwuu, dịka anyị kwuburu, ma gịnị kpatara ya. gịnị kpatara ịkpọ Black Friday, ma ọ bụ gịnị bụ otu, Black Friday?
N'otu aka ahụ, a na-akpọ ya n'ihi ọnụ ọgụgụ nke okporo ụzọ na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-abanye n'okporo ámá ụbọchị ahụ, ma e nwere ihe ọzọ mere ka ọ pụta ìhè nke abụọ. Dị ka ị maara, mgbe azụmahịa ma ọ bụ ahia na-eweta mfu na nsonaazụ akụ na ụba ya, a na-ekwu na ọ na-adaba na ọnụọgụ uhie, ma enwere ike ịsị na ọ dị na ọnụọgụ ojii, ya mere Friday nke onyinye na ọnụ ahịa dị ala. akpọrọ Black Friday (Black Friday na Bekee).
N'ihi na oru buu igba n'ulo ọ ghọrọ a ezigbo ụbọchị nke tufuo mmepụta njuputa, ngwaahịa na-enwebeghị ike na-ere na-abawanye ahịa, n'ihi na ọkụ ọkụ ohere nke na-enweta ihe ha chọrọ na a ala price karịa na mbụ .
Kedu nke ka mma, Fraịde ojii ma ọ bụ monday cyber?
Ebe ọ bụ na Cyber ​​Monday A na-eme ememe ya na obodo anyị obere oge ma bụrụ ndị a na-amaghị nke ọma, anyị nwere ike ịsị na Black Friday dị mma, ma a bịa n'ihe gbasara ngwaahịa ndị a pụrụ ịzụta na ntanetị na ndị ọrụ na-ahụ n'anya ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ nwere ike inwe ụfọdụ uru. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụta ya na ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ mpaghara, ị ga-ahọrọ ime ya na Black Friday, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ya na ntụsara ahụ nke ụlọ gị, ikekwe onyinye Cyber ​​​​Monday ga-eme ka ị kwenye karịa. . Ịza na otu n'ime ụbọchị abụọ ahụ dị mma karịa nke ọzọ ga-adaba maka azịza dị mfe. Ọ ga-adabere na onye ọrụ na onye ahịa.
Mgbe Cyber ​​​​Monday na laptọọpụ, agbagharala nhọrọ anyị:
Otu esi enweta ọmarịcha azụmahịa na laptọọpụ Black Friday
Kedu otu ị ga-esi mara ma ọ bụrụ na ire Black Friday na laptọọpụ bara uru? Nke mbụ, a ga-agwa gị dịka o kwere mee banyere onyinye, ụlọ ahịa ndị ga-enye ego maka Black Friday na ngwaahịa ị chọrọ. Ị nwere ike iburu gị n'ụbọchị ahụ site na ihe ọkụ ọkụ na ngwaahịa ma ọ bụ onyinye ndị ọzọ ịchọrọ ịme na ekeresimesi, mana iji jide n'aka na ị nwetara laptọọpụ ma ọ bụ smartphone nke ịchọrọ na ọnụ ahịa dị mma, ọ kacha mma ka ị mara ihe nlereanya ị chọrọ. chọrọ na ihe ika, ịmara nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ weebụsaịtị ịzụta na nke ọ bụghị, yana nke ọ ga-adị ọnụ ala na nke ọ bụghị.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịzụrụ ihe site na ebe nrụọrụ weebụ dị ka Amazon, ị kwesịrị ịṅa ntị na ngwa ngwa ngwa ngwa, na-eme ka ịzụrụ ihe n'oge dị mkpirikpi ma mee mkpebi n'oge dị mkpirikpi, yana tụnyere ọnụahịa n'etiti ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche. Otu ihe ahụ na-eme na ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ anụ ahụ. Tulee, chọta ngwaahịa achọrọ wee nweta onyinye kacha mma.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ dị ọnụ ala na Black Friday
Dị ka ọ dị na ngalaba ndị ọzọ, kọmpụta na ndị ọzọ kpọmkwem laptọọpụ, nwere ọnụ ahịa dị ala nke ukwuu n'ụbọchị ahụ. Ọ bụghị naanị na Amazon, mana na ụlọ ahịa ndị ọzọ pụrụ iche dị ka Fnac ma ọ bụ Mediamarkt. Dịka ọmụmaatụ, na Fnac afọ ndị ọzọ anyị enwewo ike ịchọta mbelata nke 21%, pasent VAT na ngwaahịa. Ya mere, maka 100 euro ọ bụla a na-eji na ngwaahịa anyị ga-echekwa € 21, nke nwere ike ịwelata n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ kewaa ụzọ abụọ dị iche iche: A na-ebelata otu akụkụ na nke ọzọ maka ịzụrụ ihe n'ọdịnihu.
Mediamarkt na ụlọ ahịa ndị ọzọ na-ebelatakwa nnukwu pasent nke ngwaahịa ahụ. Laptọọpụ bụ otu n'ime ngwaahịa kachasị amasị maka ụbọchị a, yabụ ị ga-ahụ ezigbo onyinye dị iche iche, ma ụdị dị iche iche na ụdị. Otu n'ime ihe kachasị mma ị ga-ahụ bụ Apple, akara nke apple bitten nke na-enye anyị ọ bụghị naanị nnukwu ngwaahịa, kamakwa ọnụ ahịa dị ukwuu. Ọnụ ahịa enwere ike wedata na ụbọchị na ụlọ ọrụ dị iche iche. Black Friday bụ ụbọchị laptọọpụ ọhụrụ anyị ga-ewetara anyị n'ọnụahịa dị ọnụ ala maka ihe anyị na-emebu.
Amazon: Ọ bụrụ na ị jụrụ m 1000 ugboro banyere otu ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ime gị niile ịzụrụ online, 1001 M ga-agwa gị na na Amazon. Maka mụ na ọtụtụ ndị ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị kachasị mkpa n'ụwa, na n'ime ya anyị ga-ahụ ụdị ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụrụ na enwere ike iziga ha. Na mgbakwunye, na mmemme dị ka Prime Day ha ma ọ bụ Black Friday, onyinye ha na-akpa ike, yabụ na ọ bara uru ilele otu ma ọ bụ karịa tupu ịzụrụ ebe ọ bụla ọzọ.
mediamarktỌ bụ ezie na nke gara aga bụ ụlọ ahịa ọkacha mmasị m ịzụrụ ihe niile, nke bụ eziokwu bụ na e nwere ihe ọzọ, dị ka Mediamarkt, nke nwere ike mgbe ụfọdụ na-enye anyị ihe ka mma. Mediamarkt bụ ọkachamara n'ịre ngwaahịa eletrọnịkị, ebe laptọọpụ na-adịkwa mma mgbe niile. Na mgbakwunye, ha na-ewepụtakwa onyinye dị mma na ụbọchị ụfọdụ, dị ka Black Friday, yabụ anyị ga-azụta ebe ahụ na n'ụbọchị ahụ n'ihi na "anyị abụghị ndị nzuzu."
KwadoroNtụnyere dị egwu, yabụ na agaghị m eme ha. M ga-ekwu naanị na ụlọ ahịa gara aga agbasawo n'ọtụtụ mba si Germany, na Worten emeela ihe yiri nke ahụ, ma naanị maka Spain na Portugal (ọ bụ Portuguese). Ọ bụkwa ụlọ ahịa pụrụ iche na ngwaahịa eletrọnịkị, yabụ ọ na-enye ọnụ ahịa dị mma mgbe niile na ụdị ihe ndị a, ihe ga-akawanye mma n'oge Black Friday.
nrutu: A mụrụ na France, Carrefour bụ nnukwu ụlọ ahịa ebe anyị nwere ike ịhụ ihe ọ bụla. Ọ bụ ezie na a na-ahụkarị ha n'obodo ọ bụla iji zụọ ihe anyị na-azụ kwa ụbọchị, ha nwekwara nnukwu ụlọ ahịa na obodo ma ọ bụ ụdị ịntanetị ha ebe anyị ga-ahụkwa ụdị laptọọpụ niile. Carrefour pụtakwara maka ịnye ọnụ ahịa dị mma, ụfọdụ ga-akawanye mma n'oge Black Friday.
Ihe PC: na-ekwu maka laptọọpụ, otu n'ime ụlọ ahịa kachasị mma ebe anyị nwere ike ịzụta ha ma ọ bụrụ na anyị bi na Spain bụ PC components. A mụrụ ha afọ 15 gara aga na, ọ bụ ezie na taa ha na-ekpuchikwa ngwaahịa ndị ọzọ, ike ha bụ kọmputa na ihe ndị anyị nwere ike iji na ha mee ihe, ya mere aha ahụ. N'ụlọ ahịa a, nke na-arụ ọrụ karịa na ụdị ịntanetị ya, anyị nwere ike ịhụ ụdị kọmpụta ọ bụla, site na ụfọdụ ụdị ama ama nwere ihe ndị dị elu karịa ndị ọzọ nke ụdị amachaghị ama nke nwere oke. Ọnụ ahịa ha na-adịkarị mma n'ime afọ niile, mana n'oge Black Friday, ha ga-adịkwu ike karị.
Fnac: si France na-abịa yinye nke ụlọ ahịa Fnac. Na mba ndị dị ka Spain, ha malitere dị ka ezigbo nhọrọ ịzụta akwụkwọ na egwu, ma ka oge na-aga, ha enwetawokwa ewu ewu maka ire ngwaahịa eletrọnịkị, n'etiti ihe ndị ọzọ. Ha bụ ụlọ ahịa nwere ugwu ụfọdụ, nke pụtakwara na ha na-enye ezigbo nkwa, dị ka ọtụtụ ụlọ ahịa dị na ndepụta a. Ọnụ ahịa na-abụkarị asọmpi, mana n'oge Black Friday ha ga-agbadata ma ọ bụ ụlọ ahịa ọzọ anyị ga-aga ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta laptọọpụ maka ekeresimesi a.
Ụlọikpe Bekee: Ọ bụ ezie na anyị na-agụ "English", ụlọ ahịa a dabeere na Spain. El Corte Inglés bụ onye ama ama maka ụlọ ahịa ngalaba ya, ndị anyị nwere ike ịhụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu obodo ọ bụla na mba ahụ, mana ha nwekwara ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ma n'anụ ahụ ma ọ bụ n'ịntanetị, ha na-enye ụdị ngwaahịa dị iche iche, n'ime nke anyị ga-ahụ laptọọpụ nke ụdị dị iche iche na-ekwe nkwa na ọ bụ naanị ụlọ ahịa dị ka ECI nwere ike ịnye anyị. N'ime afọ ndị ọzọ, ọnụ ahịa anyị na-ahụ na-adaba na ọnụahịa akwadoro, mana n'oge Black Friday nke a na-agbanwe nke ukwuu ma anyị nwere ike ịchọta ego nke nwere ike iru ma ọ bụ gafere 30%.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Mgbidi » Laptọọpụ Black Friday